Mbola am-perinasa ity “sous-brigradier de police” ity izay voasaringotra tamin’izao resaka halatra sy fampiasana taratasy hosoka izao. Ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana no nahalalana fa ny alarobia faran’ny volana jolay teo izy sy ny namany roalahy izay mpiasa tao amin’ilay orinasa no nikasa hangalatra entam-barotra iray fiara ka nampiasa “bon de livraison” tsy tena izy mba hamoahana fiara vaventy. Ireo mpiasa roalahy ireo no nikarakara ilay taratasy hosoka ary ilay polisy no mody natao ho mpividy ka nitondra kamio hakana izany. Niantso ireo manampahefana avy hatrany ny tompon’orinasa raha vao nahatsikaritra izany ka nisambotra ireto telo lahy ireto. Ankoatra ny vesatra fiampangana fikasana hangalatra sy firaisana tsikombakomba tamin’ny taratasy hosoka izay anenjehana ity polisy ity eny amin’ny fitsarana, efa niroso ihany koa tamin’ny fanadihadiana anatiny sy ny fampiharana ny sazy henjana mifandraika amin’ny fitsipi pitondrantena ny teo anivon’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka. Nanamafy ny minisitra mpiahy, CGP Roger Rafanomezantsoa fa tsy ijerena arina an-tava ny fanatanterahana ny fanajana ny fitsipika eo anivon’ny polisim-pirenena.